“गणतन्त्र प्रचण्डले, ल्याएका हुन्ः डा. सुरेन्द्र केसी” – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“गणतन्त्र प्रचण्डले, ल्याएका हुन्ः डा. सुरेन्द्र केसी”
“काठमाडौ । राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र के सी ले एक कार्यक्रममा बोल्दै गणतन्त्र प्रचण्डले ल्याएका हुन भनेका छन्। उनले आफुले गणतन्त्र के पी ओलीले ल्याएको कहिले नभनेको बताएका छन्। गणतन्तको आन्दोलन चलिरहँदा आफु जागिरे जिवनमा नै रहेकोले कुरा बताएका छन्।”
“यस अघि प्रचण्डको बारे आगो ओकाल्दै आएका के सी ले केहि सयमयता नेपालको राजनितिमा त्यागी नेता प्रचण्ड हुन् भन्दै आएका छन्।”
“यस अघि प्रचण्ड बारे के सी को धारणा”
“राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले नेपाली राजनीतिमा नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अत्यन्तै कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।”
“मंगलबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै केसीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘प्रचण्डले त अहिले केपी ओलीको पनि सेकेण्ड म्यान भएर पोलिटिक्स गर्नु भनेको त अकल्पनीय हो नि त । र, उहाँले यो सम्म भन्नुभएको छ की प्रधानमन्त्रीको पूर्ण अवधि नै केपी ओली हो भन्नुभएको छ ।’
“प्रचण्डको बोलीमा विश्वसनियता नभएको भनेर आम जनताले नै तर्क गर्न थालेको उनको भनाई छ । प्रचण्डजस्तो क्रान्तिकारी नेताले यसरी सम्झौता गर्नु आफैंमा रहस्यमयी रहेको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘मैले त उहाँको बारेमा हठात, अपारदर्शी र रहस्यपूणृ भनेको छु ।”
“उनले नयाँ वर्ष २०२० चूनौति हुने बताउँदै यसले कुन कुन बाटो र अवस्था लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको सुनाए । सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प विवादमा परेको र चीनपनि हङकङलाई लिएर बढि नै विवादित भएकोपनि उनले तर्क गरे ।केसीले हङकङकमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासहितको चुनाव नभएको जिकिर गरे ।”
“रसिया विश्वमै उदयीमान शक्तिको रुपमा आईरहेको सुनाउँदै रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नेपाल आउने भन्नेपनि रहेको उनले जानकारी दिए । भारतमा बिजेपीको प्रारम्भिक रुझान झारखण्डमा पराजय भोगेको पनि उनले सुनाए ।”
“केसीले भने,‘त्यही खालको स्थिति अहिले नेपालमा पनि देखिँदैछ । अहिले जो दुई तिहाई बहुमतको सरकार वाम हो, त्योप्रति पनि नकारात्मक रुझान धरानको उपमहानगरपालिकाको चुनावमा देखियो”
“केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । २०१९ नेपाल र नेपालीहरुको लागि फलदायी नभएको उनको गुनासो छ ।”
Previous “गगन’ थापा’को प्रश्न :- प्रधानमन्त्री’ ज्यू, पूर्व प्रम’को खर्च व्य’होर्ने निर्णय कुन ,कानुनमा’ टेकेर गर्नु’भयो ?
Next “निगम,लाई निजी क्षेत्रको जिम्मा, लगाउन खोज्नु नि,न्दनीय र घृ,णित: भट्टराई